Ipolisi Yokubhala Uluvo Yakwa-Airbnb - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Iakhawunti yakho – isihloko soncedo
Izimvo – isihloko soncedo
Ipolisi Yokubhala Uluvo Yakwa-Airbnb – inqaku loncedo
Ipolisi Yokubhala Uluvo Yakwa-Airbnb
Ukuze sibe newebhusayithi enabantu abathembanayo, sicela intsapho yethu ukuba incedise ekuqinisekiseni ukuba izimvo ziluncedo, zinikela ngenkcazelo kwaye ezibeki intsapho yethu engozini. Ngoko, silindele ukuba zonke izimvo zithobele ezi zinto zilandeleyo:
1. Izimvo akufunekanga zaphule ipolisi yethu yezinto ezifakwayo
Ezinye izinto azivumelekanga kwaphela kuAirbnb. Ungahlola Ipolisi ka-Airbnb Yezinto Ezifakwayo ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.
2. Izimvo kufuneka zingakhethi
Izimvo ziluncedo kakhulu xa zinenkcazelo engakhethiyo. Ngenxa yaloo nto, asibavumeli abantu okanye amashishini angabanikazi okanye abanento yokwenza nendlu okanye into enokonwatyelwa ukuba bafake izimvo zeshishini labo. Asibavumeli nabantu abaqinisekisiweyo ukuba banezindlu okanye izinto ezinokonwatyelwa ezikhuphisanayo ukuba bafake izimvo ngabantu abakhuphisana nabo ngqo.
Awuvumelekanga ukuba unike umntu into ukuze afake izimvo ezintle, ukugrogrisa ngoluvo olubi ukuze ufumane into oyifunayo okanye uchaphazele uluvo lomnye umntu ngokumthebisa ukumbhatala.
Awuvumelekanga nokuba wamkele ukubhukisha okungeyonyani ukuze ufumane izimvo ezintle, usebenzise iakhawunti yesibini ukuze ubhale uluvo ngesiqu sakho okanye ucele abanye abantu abakwishishini lakho bashiye izimvo ezintle.
Ngaphezu koko, izimvo zendawo zisenokususwa kwiwebhusayithi ukuba yaphulwe kakhulu Ipolisi Yeepati Namatheko. Oku kunceda ababuki zindwendwe bakhululeke ngakumbi ukuba banqande xa kukho ipati ephazamisayo, bengenaxhala lokuba baza kufumana uluvo olubi ngenxa yaloo nto.
3. Izimvo kufuneka zibe luncedo
Izimvo zakho mazihlale zinento yokwenza noAirbnb, indawo ubuhleli kuyo okanye into enokonwatyelwa, kuba iindwendwe zifunda izimvo zakho ukuze zazi ngombuki zindwendwe nendlu yakhe. Izimvo eziphuma emxholweni zinokuphazamisa kwaye azizincedi ezinye iindwendwe zenze izigqibo zokubhukisha zinolwazi olwaneleyo. Ngenxa yesi sizathu, izimvo zifanele zithethe ngendlela oqhubene ngayo namanye amalungu entsapho nexesha lakho olichithe kwindawo okanye into enokonwatyelwa.
Ukuze izimvo zihlale ziluncedo, sicebisa ukuba uziphephe ezi zinto zilandelayo:
Ukuthetha ngento oyicingayo ngabantu, ipolitiki okanye inkolo
Ukuthuka, ukubiza abantu ngamagama amabi, ukucingela ukuba umntu unjani
Izinto ezithetha ngeemeko omnye umntu ebenganakuzilawula
Izinto ezithetha ngeenkonzo ezingenanto yakwenza noAirbnb (ngokomzekelo, inkampani yeenqwelo-moya, izithuthi okanye ivenkile yokutya, njl).
Ukuthetha ngokubhukisha kuka-Airbnb, ababuki zindwendwe okanye iindwendwe zexesha elidlulileyo, okanye ngento ka-Airbnb engenanto yakwenza nendlu, umbuki zindwendwe okanye undwendwe olushiyela umlinganiselo
Xa sifumana ingxelo ngoluvo olwaphula le polisi, sisenokulususa olo luvo kwiwebhusayithi yethu. Ukuphinda-phinda ukwaphula le polisi kunokuphumela ekunqumamisweni okanye ekwenziweni ingaphinde isebenze iakhawunti (iiakhawunti) yaloo mntu ushiye ezo zimvo.
Ukuxela uluvo olwaphula ipolisi yethu
Ukuze uxele uluvo olwaphula ipolisi ka-Airbnb yezimvo, qhakamshelana nathi.
Ukuba uvakalelwa kukuba uluvo aluyonyani
Nangona sikhuthaza kwaye silindele ukuba onke amalungu entsapho afake izimvo ezinenkcazelo engakhethiyo nechanileyo, uAirbnb akangeneleli xa kungavisiswana ngobunyani bezimvo. Silindele ukuba umntu obhala uluvo ayimele into ayibhalileyo. Ukuba ufuna ukuphendula uluvo, funda ukuba ungenza njani.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngendlela esiphanda nesihlola ngayo ukungavisisani kwezimvo, funda Ngokuhlolwa Kokungavisisani Kwezimvo zika-Airbnb.